पतिले दोस्रो बिहे गरेपछि छोरीका लागि बाँचेकी डडेल्धुराकी खेट्टी मल्ल, जो छोरीको प्रगति देख्नै नपाई अस्ताइन्
कोरोना महामारीका कारण घर जान नसक्दा आमाछोरीको भेट नभएको धेरै भइसकेको थियो। दसैंमा जसरी पनि भेट्ने योजना थियो कमलाको। तर उनको इच्छा पूरा हुन पाएन।
मेलम्चीको बगरबाट उठ्न खोजेको एउटा सपना
हातमा पैसा भएर कृषि फार्म सुरु गरेका होइनन् उनीहरुले। यताउतिबाट ऋणधन गरेर काम गर्न खोजेका थिए। उनीहरुको करिब चार करोडको लगानी एकैरातमा मेलम्चीमा चुर्लुम्म डुब्यो।
आमाको किरिया गर्न नगएका कर्ण जसले स्टेजमा आमाकै लागि गाए
गिरी स्टेजमा चढेपछि गाउँमा आमाले अन्तिम सास फेरिकी थिइन्। गायकीकै माध्यमबाट आमालाई काठमाडौंसम्म ल्याउने सपना अधुरै रह्यो कर्णको। भ्वाइस अफ नेपाल जितेर आमालाई पुरुस्कार थमाउने उनको सपना बिचैमा तुहियो।
महामारीमा थलिएका बस व्यवसायी गणेश जो घरै बेच्ने अवस्थामा पुगेका छन्
घरबार चलाउने, छोराछोरी पढाउने त्यही बसको कमाइले हो। ऋणको किस्ता तिर्नु त छँदैछ। लकडाउनका कारण बस थन्किएपछि उनको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको छ।
डोजरे विकासले हिमाली गाउँपालिकाका दुई गाउँ भासिए, अध्यक्ष भन्छन्– हामीलाई बचाउनुस्
बाजुराको दुर्गम हिमाली गाउँपालिकाका दुर्ई बस्ती भासिँदा १३७ परिवारको उठीबास भएको २० दिन बितिसकेको छ। घर भासिएपछि दुई गाउँका स्थानीय करिब एक घण्टा टाढाको जोरगाउँ जंगलमा बसिरहेका छन्।
खोप लगाउन जाँदा वडाध्यक्षको हप्कीदप्की– खोप चाहिए केपी ओलीलाई भन्नू
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप भेरोसेलको दोेस्रो डोज लगाउन मंगलबार बिहान सात बजेदेखि लाइनमा लागेका रुद्रप्रसाद गुरागाईंको पालो दिउँसो दुई बजेसम्म पनि आएको थिएन।
'काठमाडौंलाई आफ्नै ठान्थे सत्यनारायण, तर होइन रहेछ!'
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी खुट्टा भाँच्चिएका सत्यनारायण राम्रोसँग हिँडडुल गर्न सक्दैनथे। सानेपा राम मन्दिर नजिकै दुई कोठाको फ्ल्याट भाडामा लिएर बसेका थिए। तीन तले घरको भुइँतला खाली नै छ। पहिलो तलामा सत्यनारायण बस्थे र दोेस्रो तलामा घरबेटी।
सरकारी वकिललाई 'हम्मेहम्मे' बनाउने प्रधानन्यायाधीशका प्रश्नैप्रश्न
बिहीबार सरकारका तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र कानुन व्यवसायीहरू सुरेन्द्र महतो, परशुराम कोइराला, सुवास आचार्य, महेश नेपाल, टंक दुलाल र रवीनारायण खनाललाई न्यायाधीशहरूका सवालको जवाफ दिन हम्मेहम्मे परेको थियो। खरेलले त आफूलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरिएको भन्दै गुनासो नै गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको दाबी- संसद् पुनःस्थापना भए सांसद किनबेच हुन्छ
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार बहस गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन संविधानसम्मत रहेको मात्रै दाबी गरेनन्, पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिएको विषयमा अदालतमाथि प्रश्न पनि उठाए।
संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीको प्रश्न- बहुमत सदस्य भएका देउवालाई किन प्रधानमन्त्री नबनाउने?
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ पटकपटक एकै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि होइन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अनेक तिग्डम गरेर संविधानका सबै धाराअनुसार आफैं प्रधानमन्त्री बनाउने बदनियतका साथ काम गरेका छन्।’
संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्नैप्रश्न : 'दायित्व पूरा नगरेको' देखि 'तिमी को हौ?' सम्म
संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको धज्जी उडाएको जिकिर गरेका हुन्।
मेलम्ची 'साइज'मा आएपछि बगरमा काठदाउरा बटुल्नेको लर्को
पानी घटेर मेलम्ची आफ्नो साइजमा आएपछि सिपाघाटमा बाढीमा बहेर आएका काठ संकलन गर्नेको लर्को छ। स–साना बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म जुटेका छन् यो काममा।
मेलम्चीका दुःखमा 'पर्यटकीय' मजाक
कवि केसीको कविताको लाइन नै छ, पहिरोलाई पहिरो हेरेजसरी हेर, पर्यटकले झरना हेरेजसरी नहेर। तर कवि केसीको यो कटाक्ष मेलम्ची–विपतमा पनि सान्दर्भिक बनेको छ।
'ज्यान र रिनबाहेक सबै बगायो मेलम्चीले'
गएको बुधबार साँझपख मेलम्चीको बाढीले डुबेको घर हेरेर टोलाइरहेका थिए मेलम्चीका रञ्जितकुमार श्रेष्ठ। रातभरको अनिदोले आँखा राता थिए। पिरले न उनी निदाउन सके, न केही खान नै।
ट्याक्सी चालक बालकृष्णका दुःख, भन्छन्- म त भित्रभित्रै मरिरहेको छु
अघिल्लो शनिबार उनले पाँच दिनपछि मेडिसिटी अस्पतालसम्म एक ट्रिप पाएका थिए। मेडिसिटी आउजाउ गर्दा १ हजार रुपैयाँ कमाए। केही दिनका तरकारी किने। उनी भन्छन्, ‘नौ जनाको परिवार छ। केही छाक तरकारी खाँदा सकियो। अब हजार कमाउन कति दिन मोबाइल हेरेर बस्नुपर्ने हो थाहा छैन।’
'नेता–मन्त्री आए, रमिता हेरेर फर्किए! हात लाग्यो शून्य'
हेलिकोप्टर र चिल्ला गाडीमा गएका उनीहरुले हिलोसमेत टेकेनन्। खाली डुबानमा परेको मेलम्ची बजार हेरे र फर्किए। पीडामा परेका मेलम्चीबासीलाई कुनै राहत मिलेन। न त ढाडस नै।
मेलम्चीकी मंगली तामाङ, जसको तीन वर्षमै उठिबास भयो
मंगलीको रात बेचैनी, छटपटीमै बित्यो। रातभर निदाउन सकिनन्। बिहानै उनी घर हेर्न फेरि गइन्। एक तला पूरै डुबिसकेको थियो। घरबाट कुनै सामान निकाल्न सकिनन्। टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प नै थिएन।
यसकारण माधवलाई नपर्खिने 'मुड' मा पुगे ओली
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा महन्थ ठाकुरको अर्को रिट
१८ अर्बबाट ५ लाखमा खुम्चियो पाम आयलको निर्यात
मदन पुरस्कारका लागि 'श्रेष्ठ सूची' सार्वजनिक
शीर्ष नेताको बैठकमा देउवाले भने- जे गर्नुपर्ने हो गरौं, महाधिवेशन भदौमै गर्ने हो
कर्णालीमा स्कोर्पियो खस्दा श्रीमान-श्रीमती बेपत्ता, छोरा र छोरी गम्भीर घाइते
एमाले महासचिव पोखरेल भन्छन्– एकताका लागि सर्तमाथि सर्त मान्य हुँदैन, अब धेरै बेर पर्खंदैनौं
उखु किसानको भुक्तानी : उद्योगीले दिएनन्, सरकारले दिलाएन
अनसन सुरु गर्दै शिक्षक महासंघले भन्यो- माग पूरा नभए प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गर्छौं
हामीलाई विदेशी डलरको मात्र भोक छ : प्रदीप गिरि
एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल र उपमहासचिव पौडेलबीच भेटवार्ता
एमसीसीका सबै सम्झौता संसद्‌मा पेश हुनुपर्छ : रावल
पूर्वमाओवादी नेताहरुको रिटमा सुनुवाइ स्थगित
चिनियाँ लोकल रक्सी बनाउने कारखानामा प्रहरीको छापा
अर्थमन्त्री शर्मा र चिनियाँ राजदूतबीच भेट, १६ लाख खोप चाडै दिने प्रतिवद्धता
संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्तै गणतन्त्र पनि आयातित हो
शिरमाथि झुण्डिएको तरबारजस्तै बन्यो गणतन्त्र
माग नसुने देउवा पनि ओलीकै बाटो लाग्नुपर्ने छ
ओलम्पिकमा आगामी ६ दशकसम्म पदकको आस नगरे हुन्छ : सुशीलनरसिंह राणा (अन्तर्वार्ता)
महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो आफ्नै कारणले पतनतर्फ : डा. सुरेन्द्र लाभ [अन्तर्वार्ता]